Momba anay - Shandong Landian Biological Technology Co., Ltd.
Shandong LanDian Biological Technology Co., LTD. dia miorina amin'ny valan-javaboary avo lenta any shouguang, faritanin'i shandong, izay eo amin'ny morony atsimo amin'ny bohai laizhou Bay ary "tanànan'ny jono, sira sy legioma" izy io. Ny orinasa no hany orinasa manana teknolojia avo lenta izay mividy ny teknolojia patanty ao amin'ny Akademia siansa momba ny siansa hamokarana asidra succinika miorina amin'ny biolojika amin'ny famokarana biolojika ary hamokatra plastika biodegradable PBS miorina amin'ny bio izay mampiasa asidra succénique ho akora fototra.
Ny orinasa dia mandrakotra ny velaran'ny 1500 mu ary ny refin'ny famolavolana ny tetikasa dia 500.000 taonina / taona asidra succinika miorina amin'ny bio sy 200.000 taonina / taona plastika biodegradable PBS miorina amin'ny bio, miaraka amin'ny fampiasam-bola 5 miliara yuan sy ny fananganana amin'ny dingana telo. Ny dingana voalohany dia nanambola 1 miliara yuan ary ny refin'ny fananganana dia 120.000 taonina / taona asidra succinika miorina amin'ny bio sy 50.000 taonina / taona vokatra PBS miorina amin'ny bio. Ny tsipika famokarana 60.000 taonina / taona voalohany tamin'ny dingana voalohany dia vita ary napetraka tamin'ny volana septambra 2017. Ny asidra succine miorina amin'ny bio dia manana kalitao tsara ary eken'ny mpampiasa betsaka.
Ny orinasa matanjaka amin'ny fikarohana sy ny haitao fampandrosoana ary ny vokatra dia voatanisa ao amin'ny tetikasa lehibe "863". Izy io dia ny toeram-piasan'ny akademia sy ny toeram-piasana postdoctoral an'ny Akademia siansa momba ny siansa, ary ny orinasam-pandraharahana amin'ny fotodrafitrasa vaovao mifototra amin'ny biolojika Weifang eo amin'ny sehatra nasionaly. Miara-miasa amin'ny oniversite Tsinghua, andrim-pianarana fikarohana biotechnology Tianjin ao amin'ny Akademia siansa momba ny siansa, nanangana laboratoara microbiology ny laboratoara, laboratoara biolojika molekiola, plastika azo simba PBS ary ny laboratoara fikarohana sy fampandrosoana azy ireo. Izy io dia manangana asidra succinika miorina amin'ny biôlôjia lehibe indrindra ao Shina sy fotodrafitrasa indostrialy PBS miorina amin'ny bio amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao biolojika mandroso indrindra eto an-tany.
01 Tombony azo avy amin'ny vokatra
Ny asidra succinika miorina amin'ny biolojika sy ny vokatra vita amin'ny sodium natokana ho an'ny biolojika, ny vokatra rehetra namboarina tamin'ny alàlan'ny fanamainana biolojika dia ho mpifaninana matanjaka hisolo ny fizotry ny famokarana petrochemical amin'ny ho avy; 1,4 butanediol miorina amin'ny bio dia tsy mitovy amin'ny vokatra novokarin'ny fomba simika. Ny vokatra biolojika, mampiasa butanediol miorina amin'ny bio dia afaka mamokatra PBAT miorina amin'ny bio sy vokatra hafa, izay afaka mampiroborobo ny fampiroboroboana ny PBAT miorina amin'ny biolojika amin'ny tsena eropeana sy amerikana. Ny vokatra andian-tsarimihetsika PBS mifototra amin'ny bio dia manana tombony mazava amin'ny fananana mekanika sy ny fahombiazan'ny fahasimbana, ary ny akora famokarana dia asidra succinika miorina amin'ny orinasan'ny orinasanay, ka mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry Eropa sy Etazonia ny atin'ny bio-carbon.
02 Tombony ho an'ny tsena
Ny famokarana asidra succénique amin'ny fomba fanamasinana biolojika dia tsy voakasiky ny vidin'ny solika, maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny vidin'ny akora, ary ny vidin'ny famokarana dia ambany noho ny fomba simika. Amin'izao fotoana izao, ny akora maloto PBS, PBST ary PBSA dia voakasiky ny vidin'ny tsiranoka asidra succinezy eo am-piandohana, mitarika fiakarana lafo ary manakana ny fampiroboroboana sy ny fampiharana ny andiany PBS. Satria napetraka eo amin'ny tsena marobe ny asidra succinika miorina amin'ny orinasa bio sy ny 1,4-butanediol miorina amin'ny bio, dia tokony hampiroborobo ny fampiharana ny andiany PBS biodegradable biolojika azo avy amin'ny bio sy ny PBAT amin'ny tsena anatiny sy ivelany.
03 Tombony ara-teknika
Ny teknolojia fanamasinana orinasan'ny orinasanay dia namaha ny trangan-javatra mahazatra ny asidra miscellaneous sy ny vokatra azo avy amin'ny fizotra amin'ny alàlan'ny fikarohana sy fampandrosoana ary fanatsarana ny fizotry ny famokarana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny vidin'ny vokatra dia nahena hatrany ary nanatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra.
04 Tombony fitantanana
Ny ekipa dia manana ekipa fitantanana feno, mahomby, haingana ary manavao. Ny orinasa dia manana tombony tanteraka amin'ny indostria amin'ny resaka tanjaky ny fitaovana enti-mandeha. Miaraka amin'ny olona avo lenta, sy ny filozofia filoham-pirenena mandroso amin'ny fotoana, ny orinasanay dia hanana tombony betsaka amin'ny indostria. Ny fihetsika.
Ny kolontsaina orinasa
Blue indostria, mitarika ny fironana manerantany
Manova ny tontolo iainana ny teknolojia
Filôzôfia amin'ny marketing
Miorina amin'ny tsena, fitakiana vaovao
Hatsarao ny tanindrazana, tomboy ho an'ny olombelona
Teknolojia aloha, famokarana mahia
Layer by layer, kalitao aloha
Amboary ny nofinao, ento ny andraikitrao
Miorena tsara sy mivadi-po
Green & zava-baovao
Ny orinasa dia mandray teknolojia vaovao amin'ny fanamasinana biolojika izay maitso, tsy misy fandotoana ary tsy misy poizina avy amin'ny akora, ny fomba famokarana ka hatramin'ny vokatra vita. Miaraka amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana nasionaly dia ilaina ny mampalaza ny plastika biodegradable miady amin'ny fahalotoan'ny fotsy. Ny asidra succinika miorina amin'ny bio novokarin'ny orinasa no hany akora ilaina amin'ny famokarana PBS plastika azo ovaina. Tsy azo soloina izy io ary azo antenaina amin'ny birao.